Ikhaya » Iindaba zeMibutho yoKhenketho » U-Lucky Onoriode George wase-Nigeria ujoyina iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika
U-Lucky Onoriode George wase-Nigeria ujoyina iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika
IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) iyavuya ukwazisa ngokuchongwa kukaLucky Onoriode George waseNigeria kwiBhodi. Uza kusebenza kwiBhodi njengelungu leBhodi yeeNkokeli zaBucala zezoKhenketho.
U-Lucky Onoriode George waseNigeria ngumshicileli kunye nomhleli wephephancwadi i-African Travel Times Magazine, ekuphela kwenyanga epapasha uhambo nokhenketho eNtshona Afrika. Uyingcali kwicandelo losasazo, ukuthengisa, kunye nobudlelwane noluntu.
Amava angaphambili abandakanya ukukhonza njengeNtloko yeLephepha loSuku lwezoShishino kunye nombonisi wezokhenketho kumabonwakude, Usebenze njengoMlawuli weMedia yeAbuja International Carnival kunye norhulumente wobumbano waseNigeria.
U-Lucky wayelilungu leQela loQoqosho loLuntu lwaMazwe aseNtshona ye-Afrika (i-ECOWAS) elisebenza kwiihotele, iiMotels, i-Inns kunye neNdawo yokuKhokela abaKhenkethi kunye nalowo wayesakuba nguNobhala woPapasho kwiFederal of Tourism Associations of Nigeria (FTAN).
Nguye kuphela ophumeleleyo kwi-Khomishini yase-Europe u-Lorenzo Nalati amabhaso eeNtatheli aXela amaLungelo oLuntu kunye neNtando yesininzi ngo-2006.